तपाईँ दैनिक चिया पिउनुहुन्छ ?, यस्ता छन चिया पिउनुका फाईदा
बिजखबर संवाददाता २०७६ असोज ४ (September 21, 2019) मा प्रकाशित
काठमाडौं । के तपाईँ दैनिक चिया पिउनुहुन्छ ? यदी तपाईँ दैनिक चिया पिउनुहुन्छ भने अनुसन्धानकर्ताहरुले तपाईँको बारेमा खुसीयाली ल्याउने खोज गरेका छन । अनुसन्धाताहरुले हालै गरेको अनुसन्धान अनुसार दैनिक चिया पिउने मानीसहरुको दिमाग अन्य मानिसको तुलनामा तेज हुन्छ । अन्य दिमागी काममा सामान्यतया मानिसहरुभन्दा दैनिक चिया पिउने मानिसहरुको दिमागी क्षमता पनि उच्च हुने उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
अनुसन्धाताका अनुसार दैनिक चिया पिउने मानिसहरुको उमेरसँगै हुने सोचाई क्षमताको ह्रासमा कमि आउँछ । दैनिक चिया पिउनाले बुढेसकालमा हुने विभिन्न प्रकारका दिमागी असन्तुलनबाट पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
दैनिक चिया पिउँदा मानव शरिरलाई फाईदा गर्छ भन्ने पछिल्ला अध्ययनले देखाउँदै आएका छन । यस्तै मानिसको मुड ठिक पार्न तथा मुटु सम्बन्धी रोगका लागि पनि चिया उत्तिकै फाईदा हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । तर हालै गरिएको अध्ययनले भने बुढेसकालसँगै सुरु हुने दिमागी समस्या भने दैनिक चिया पिउनाले ५० प्रतिशत कम हुने बताएको छ । चियाले दिमागमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पार्दछ भनेर अध्ययनले पुष्टी गरेको छ ।
अनुसन्धानमा ६० बर्ष उमेर कटेका ३६ जना पुरुषहरुलाई समावेश गरिएको थियो । र उनीहरुलाई उनीहरुको स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक स्थास्थ्यको बारेमा प्रश्न सोधिएको थियो । उक्त सहभागिहरुको एमआरआई र विभिन्न मनोवैज्ञानिक जाँच २०१५ देखि २०१८ सम्म गरिएको थियो ।
उक्त अनुसन्धानमा २५ बर्षसम्म हप्तामा ३ देखि ४ पटक चिया पिउने मानिसमा अन्य चिया नपिउने मानिसको तुलनामा मानसिक स्थिति अति राम्रो रहेको पाईएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा
१३६ वर्ष पुरानो चिया कारखाना जीर्ण बन्दै, ७ चिया बगान भारतको संघाई ग्रुपलाई
टी ब्यागको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि घातक ! यस्तो छ असर
सरकारी नीतिका कारण चिया निर्यात घट्यो, चिया किसानलाई दिन सकेन युरिया मल
५२ चिया उद्योग बन्द गर्ने उद्योगिको निर्णय, नगरपालिकाले आफूखुसी मूल्य तोकेकोमा विरोध
चिया उद्योगी र मजदुरबीच ३ बुँदे सहमति, आजै काममा फर्कने
दुई चिया उद्योग विरुद्ध मुद्दा, टोकलामा भेट्यो न्युन गुणस्तर